Samir Nasri Oo Saddex Ciyaar Caalami Ah Lagu Ganaaxay Habdhaqankiisii Euro 2012 - jornalizem
Samir Nasri Oo Saddex Ciyaar Caalami Ah Lagu Ganaaxay Habdhaqankiisii Euro 2012
Samir Nasri iyo Jeremy Mesez ayaa laga ganaaxay xulka Faransiiska kadib markii guddi Anshaxa ah uu dhagaystay dacwad laga soo gudbiyey habdhaqankoodii tartankii Euro 2012
Laacibka qadka dhexe ee Manchester City Nasri ayaa saddex ciyaar laga mamnuucay inuu u safto xulka dalkiisa kadib markii uu si xun ula hadlay weriyaal kadib kulankii xulka Spain uu ka badiyey xulka France kulankii quarter-finalka ee Euro 2012.
Laacibka garabka uga ciyaara kooxda Paris St Germain Menez oo aan joogin goobtii dacwada lagu dhagaysanayay ayaa hal ciyaar lagu ganaaxay kadib markii uu la murmay garsoore Talyani ah iyo goolhayaha xulka dalkiisa kulankii Spain ay la yeesheen xulka Faransiiska.
Labada ciyaaryahan ee Yann M’Vila iyo Hatem Ben Arfa oo guddiga horyimid ayaa digniin loo soo jeediyey waxayna ka baxsadeen in wax ganaax ah lagu rido.
Ciyaaryahanka qadka dhexe ee Rennes M’Vila ayaa loo haystay dambi ah inuusan gacan qaadin ciyaaryahankii lagu bedelay kulankii Spain ay la yeesheen ee Olivier Giroud iyo tababare Laurent Blanc.
Ben Arfaha New Castle ayaa waxaa loo haystay isagoo qolka nasashada kula murmay tababare Blanc kulankii ay la yeesheen xulka Sweden.
Ganaaxan awgii ayaa tababaraha cusub ee Faransiisa Dideir Deschamps waxaa ka maqnaan doona Nasri iyo Menez kulanka saaxibtinimo ee la qorsheeyey inay la yeeshaan xulka Uruguay bisha August 15keeda.
Nasri ayaa waxaa sidoo kale uu ka maqnaan doonaa labada kulan ee ugu horeysa ee isreebreebka koobka adduunka ee xulka Faransiiska la yeelan doono Finland September 7 iyo afar maalmood kadib kulanka ay martigelin doonaan xulka Belarus.